Meat | Food Magazine Myanmar | Page 17
ကြက်သားကင် တော်တီလာစ်လိပ် (Char grilled Chicken Wrap)
ကြက်သားကင် တော်တီလာစ်လိပ် (Char grilled Chicken Wrap) ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်လျော်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းနေရသောသူများအတွက် အဆင်ပြေစေသော အစားအစာလေးပါ။ လုပ်စားကြည့်လိုက်နော် . . . ။ ► ပါဝင်ပစ္စည်း (၁ ယောက်စာ) ♦ တော်တီလာစ်ပြား – ၁ ....
ဝက်သားချဉ်စပ်မြေအိုးဟင်းလျာ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ဝက်သား – 200 g (အသား (သို့) ၃ ထပ်သား) ♦ ခရမ်းချဉ်သီး – ၁ လုံး ♦ ပန်းငရုတ်ပွစိမ်း – ၁ လုံး ♦ စပါးလင် – ....
မျှစ်ချဉ်ခေါက်ဆွဲ ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို နေရာဒေသအလိုက် မတူညီတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်စားကြတဲ့အထဲ အမဲသားမျှစ်ချဉ်ခေါက်ဆွဲလေးက အရသာထူးခြားလှတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ မြေပဲဆံ၊ ပဲပြင်းစေ့နှင့် အသားမျှစ်ချဉ်တွဲဖက်ထားသော တမူထူးတဲ့ရှမ်း ခေါက်ဆွဲဆိမ့်ဆိမ့်လေး လုပ်နည်း၊ ချက်နည်းလေးကို စိတ်ရှည်စွာသင်ပြပေးတဲ့ မမကြီးကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲချစ်သူများတွက် ချက်နည်းလေး မျှဝေပေးလ်ိုက်ပါတယ်။ ချက်စားကြည့်ရအောင်နော်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ....
Gli Pollo Spaghtti (ကြက်သားစပါကတီ)
Gli Pollo Spaghtti (ကြက်သားစပါကတီ) ဒီ စပါကတီလေးကတော့ အီတလီနိုင်ငံက စတင်လာတာပါ။ Gli Pollo ကတော့ အင်္ဂလိပ်လို The Chicken လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ကြက်သားကို အသေအချာ အရသာသွင်း၍ကင်ထားပြီး စပါကတီနှင့် တွဲကျွေးတာပါ။ ပူပူလေးဆိုတော့ ပိုပြီးစားကောင်းတာပေါ့။ အိမ်မှာလုပ်ပြီး ....
Crispy Fish Cheese Roll (ငါးအသားလိပ်ချိစ်အကြွပ်)
Crispy Fish Cheese Roll (ငါးအသားလိပ်ချိစ်အကြွပ်) ဒီအစားအစာကလေးကတော့ ငါးကို လိပ်ပြီး အကြွပ်ကြော်ထားတာပါ။ ကြွပ်ရွပြီး စားကောင်းတာမို့ ကလေးရောလူကြီးပါ ကြိုက်ကြပါတယ်။ အိမ်မှာလည်း လုပ်လို့ရတဲ့ အစား အစာဖြစ်နေတော့ အားတဲ့အချိန်တွေမှာ အိမ်မှာလုပ်ပြီးစားတော့ အပျင်းလည်းပြေတာပေါ့။ ကဲ . . . ....
5 - August - 2016
ဝက်စဉ်းသားမြန်မာပင်စိမ်းထမင်းကြော် (Chopped Ham Basil Fried Rice)
ဝက်စဉ်းသားမြန်မာပင်စိမ်းထမင်းကြော် (Chopped Ham Basil Fried Rice) ဒီချက်နည်းမှာသုံးတဲ့ Chopped Ham ကို အသားဘူးအနေနဲ့ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ တစ်ဘူးစာကို အသား များများစားတာကြိုက်သူတွေအတွက် ၂ ပွဲစာရသလို အသားလျှော့ရင်တော့ ၄ ပွဲစာအသာလေးရပါတယ်။ ဒီချက်နည်းကတော့ ၄ ပွဲစာရေးပေးထားတာပါ။ ► ....
“Ripeye Steak With Garlic Butter Red Wine Sauce” (လွစ်အိုင်းစတိတ်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ထောပတ်ဝိုင်နီဆော့စ်)
“Ripeye Steak With Garlic Butter Red Wine Sauce” (လွစ်အိုင်းစတိတ်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ထောပတ်ဝိုင်နီဆော့စ်) Ripeye Steak Beef ကို ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီး ချက်ပြထားပါတယ်။ (Red Wine) ဝိုင်နီနဲ့ (Butter) ထောပတ်ကို ကြက်သွန်ဖြူ (Garlic) ....
အာလူးပြုတ်နဲ့ အမဲနံရိုးစတူး (Boiled Potatoes and Beef Rib Stew)
အာလူးပြုတ်နဲ့ အမဲနံရိုးစတူး (Boiled Potatoes and Beef Rib Stew) ဟင်းတစ်ခွက်ထဲနဲ့ အာဟာရ၊ အရသာပြီးပြည့်စုံပြီး စားပြီးခွန်အားပေးသော ဒီဟင်းပွဲလေးက အခုလိုမိုးရာသီနဲ့ အင်မတန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ချက်စားကြည့်လိုက်နော် . . . ။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ အာလူး ....